DHAGEYSO:- Wararkii ugu Danbeeyay Dagaalka maanta ka dhacay Gobalka Mudug iyo Khasaaro badan oo laga soo sheegayo | Barbaariyaha bulshada
DHAGEYSO:- Wararkii ugu Danbeeyay Dagaalka maanta ka dhacay Gobalka Mudug iyo Khasaaro badan oo laga soo sheegayo
Sep 5, 2016 - jawaab
Xaalad Kacsan oo dagaal ayaa ka jira deegaanada bariga ee magaalada Gaalkacyo, gaar ahanaa dhulka loo yaqaano Caduunka, oo ay maanta weerar ku qaadeen ciidamada Galmudug, sida ay sheegayaan wararka laga helayo Aagaga dagaalka.
Waxgaradka magaalada Gaalkacyo ee Puntland ayaa ku eedeeyey Galmudug in ay ka shaqeynayso amaan darro iyo dagaaladii Gaalkacyo oo ay dib u soo celisay.
Nabadoon Raage Max’uud Gaani ayaa sheegay in ciidan Galmudug ah oo Daraawiishta loo yaqaano ay weerar ku qaaden dad shacab ah, isagoo sheegay in khasaare badan soo gaaray.
Nabadoon Gaani ayaa sheegay in ay arrintan tahay mid looga gol leeyahay in dagaalo laga abuuro guud ahaanba gobalka Mudug.
Nabadoonka ayaa cadeeyey in aysan Indhaha ka qarsan doonin waxa ka socda aggaas, isla markaasna ay arrintu isku bedelayso Hanaan maamul in looga jawaabo.